Puntland oo heshiis la gashay shirkado maxali ah si ay u dayactiraan waddooyin iyo buundooyin - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandPuntland oo heshiis la gashay shirkado maxali ah si ay u dayactiraan waddooyin iyo buundooyin
September 19, 2021 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Wasiiradda maaliyadda iyo howlaha guud ee Puntland oo heshiis la galay shirkada maxaliga ah. [Isha Sawirka: Wasaaradda Maaliyadda Puntland]
Garoowe-(Puntland Mirror) Dowladda Puntland ayaa maanta oo Sabti ah heshiis la gashay shirkadaha maxaliga ah ee Albaashi, Ceeldaahir iyo Kebarco si ay u dayactiraan waddooyin iyo buundooyin u dhaxeeya Gaalkacyo iyo Boosaaso kuwaasoo ay burburiyeen roobabkii dhawaan da’ay.
“Dowladda Puntland ayaa bixisay dhammaan lacagihii lagu bilaabayey dhismaha Waddooyinkan oo ay Dowladdu ku wareejisay shirkadaha ka hawl galaya.” Ayaa lagu yiri war-saxaafadeed ka soo baxay Wasaaradda Maaliyadda Puntland.
Garowe-(Puntland Mirror) Somali pirates have hijacked Indian cargo ship with 11 crew members onboard, India’s Times Now TV reported. The incident took place on Saturday, and the ship was carrying shipment from Dubai to Yemen’s [...]
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa Cabdirisaaq Xuseen Nuur Dirir u magacaabay guddoomiyaha gobolka Mudug, sida lagu sheegay bayaan maanta oo Sabti ah kasoo baxay xafiiska madaxtooyada. Cabdirisaaq ayaa badali doona Xasan [...]